Honor Band 5: mivoaka ny famaritana, ny vidiny ary ny famotsorana | Androidsis
Andro vitsy lasa izay dia naseho izay mety hisy ny datin'ny fampisehoana an'ny Honor Band 5. Ny marika sinoa dia efa manana ny andiany vaovao amin'ny fehin-tànany mihetsika, izay tsy mbola nisy fantatra hatreto. Na dia nanokatra ny fotoana famandrihana ho azy aza i Amazon Germany, misaotra ny zavatra azonay atao Mitadiava fampahalalana momba ity fehin-tanana vaovao ity.
Hatramin'ny voalohany efa voafaritra ny famaritana an'io Honor Band 5 io. Fehin-tanana vaovao ahitantsika ny marika sinoa dia manolo-tena hanolotra mpifaninana mivantana ho azy ny Xiaomi Mi Smartband 4, natolotra tamin'ny fomba ofisialy iray volana lasa izay.
Ny voninahitra dia iray amin'ireo marika nisafidy betsaka indrindra an'ireo fehin-tànana fanaovana hetsika. Ny marika sinoa dia namela antsika taranaka maro, izay miloka amin'ny maodely ara-toekarena izy ireo, fa miaraka amin'ny masontsivana tsara. Tamin'ny taon-dasa dia namidy ny taranaka fahefatra, natolotra niaraka tamin'ny Honor 8X. Izany dia efa dingana mandroso amin'ny lafiny famaritana, ankehitriny, mamela antsika ho amin'ny fahadimy izy ireo.
1 Honor Band 5 famoahana famaritana
Honor Band 5 famoahana famaritana
Ny filohan'ny marika no niandraikitra ny famelana anay ny sary voalohany amin'ny fehin-tànana. Nambara ihany koa fa ny Honor Band 5 dia hanana fahaizana mandrefy ny habetsan'ny oxygen ao anaty ra. Ny famoahana vaovao dia ahafahantsika mahazo fampahalalana fanampiny momba ny bracelet an'ny marika sinoa. Voamarina fa hanana tontonana AMOLED isika miloko miaraka amin'ny fanaraha-maso, toy ny amin'ny fehin-tànana Xiaomi.
Ankoatr'izay dia hanana bokotra iray ahafahantsika miditra mora foana amin'ny efijery an-trano. Ho tonga ny fehin-tànana miaraka amina fanaraha-maso ny tahan'ny fo, ankoatra ny fampitandremana antsika raha sendra misy anomaly. Toy ny mahazatra, dia hitazona ny asantsika isan'andro, manisa ny dingana, ny dia lavitra na ny kaloria nodoranay. Io dia hamela ny fahazoana fampandrenesana marani-tsaina (ao anatin'izany ny ID mpiantso, SMS, mailaka na tambajotra sosialy).
Azontsika atao ny mampiasa ny Honor Band 5 amin'ny toe-javatra isan-karazanyna dia milomano aza. Izy io dia azo ampiasaina na amin'ny filomanosana amin'ny dobo na amin'ny rano malalaka. Ho an'ity, mampiasa marika sensor IMU (Unitére reférement inertial) enina axis ny marika afaka mamantatra ny fomba, ny halavirana, ny halavany, ny kapoka, ny kaloria na ny fahombiazan'ny teknikan'ny mpampiasa. Ho fanampin'izany, hanana fanohanana izahay amin'ireo hetsika hafa ivelan'ny rano, toy ny mihazakazaka, mandeha an-tongotra na bisikileta. Ka voarakitra an-tsoratra ny fanazaran-tena ataonay. Mampanantena ny hanao tsara amin'ity lafiny ity izy.
Tsy fantatray ny haben'ny efijery. Na dia fantatsika aza fa ity Honor Band 5 ity dia hanana refy 4,3 x 1,7 x 1,1 cm ary 22,7 g fotsiny ny lanjany. Antenaina fa azontsika atao ny mividy azy amin'ny loko telo farafahakeliny, farafaharatsiny ao Amazon Alemana dia misy loko telo amin'ny bracelet aseho. Izy ireo dia Coral Pink (mavokely), Meteorite Black (mainty) ary Midnight Navy (navy manga) izay nofidin'ilay orinasa.
Ny vidin'ny Honor Band 5, farafaharatsiny hitanao amin'ny tranokala Amazon any Alemana, dia 59,90 euro. Ka mitazona ny vidiny mitovy amin'ny an'ny teo alohany. Ny marika sinoa dia manolo-tena tsy hanova azy amin'io lafiny io, na dia eo aza ny fahitanay ny andiam-panatsarana lehibe, ankoatry ny fiovan'ny endrika ao aminy. Angamba, any Espana dia hanana ny vidin'ny varotra mitovy izy io.
Efa natomboka tany Alemana ny famandrihana ny haba. Fa vao afaka mividy ilay brasele dia mila miandry iray volana hafa ianao. Mampiseho izany Ny daty famotsorana Alemanina dia ny 15 Aogositra. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika raha daty mitovy amin'ny an'ny firenena hafa any Eropa izany. Saingy tsy tokony ho samy hafa be amin'ireo tsena ireo. Na izany na tsy izany dia hitandrina isika, satria afaka tapa-bolana dia ho fantatsika amin'ny fomba ofisialy ity Honor Band 5 ity ary hahafantatra ny zava-drehetra momba ity faribolana vaovao ity amin'ny marika sinoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Sivanina ny tsipiriany momba ny Honor Band 5
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny Nokia 2.2
Ny Hisense D6 dia smartphone henjana vao voamarina miaraka amin'ny bateria 5400 mAh sy maro hafa